Ra’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddi sare oo u qaabilsan doorashada | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ra’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddi sare oo u qaabilsan doorashada
Ra’iisul Wasaare Rooble oo magacaabay guddi sare oo u qaabilsan doorashada
Muqdisho (Halqaran.com) – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa habeenkii xalay aheyd magacaabay guddi sare ee Farsamo oo ka taageeraya arrimaha doorashooyinka dalka.
Wareegto uu soo saaray Ra’iisul Wasaare Rooble ayuu ku magacaabay guddiga sare ee Farsamada ee ka taageeraya xafiiska Ra’iisul Wasaaraha arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhawaan ka dhacaan dalka , kuwaasi oo ka kooban 7-xubnood.
Guddigan ayaa howshiisa tahay isku xirka dhammaan howlaha doorashooyinka ee hay’adaha ku shaqada leh, sida Beesha Caalamka, Golaha Wadatashiga Qaran iyo Guddiyada kale ee doorashooyinka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Guddigaan uu magacaabay Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa waxaa guddoomiye loo dhigay Cabdulqaadir Cimi Cali, waxaana Guddiga ku jira Cumar Maxamed Cabdulle oo mar soo noqday Guddoomiyhii Gudigii doorashada ee sanadkii 2016.
Magacaabista guddiga farsamada ee doorashada ayaa timid kadib markii jahwareer ka dhashay qaabka uu Ra’iisul Wasaare Rooble u maareynayo mas’uuliyadda loo igmaday qabashada doorasho loo dhanyahay.
Hoos ka akhriso magacaabista guddiga sare.